चर्चित निर्देशक शोभित बस्नेतको यो कस्तो सोख ? – Namaste Filmy
चर्चित निर्देशक शोभित बस्नेतको यो कस्तो सोख ?
[dropcap]च[/dropcap]र्चित चलचित्र निर्देशक शोभित बस्नेत बेलाबेलामा विभिन्न कारण चर्चामा आइरहन्छन । यसरी चर्चामा आउदा उनलाई आनन्द लाग्छ । राम्रो होस या नराम्रो कसैले कुरा काटेको उनलाई असाध्यै मनपर्छ । कतिपय स्क्यान्डलहरु त उनी आफै सिर्जना गर्छन, जसले उनलाई चर्चामा ल्याओस । कुनै काम बाट सांझ घर फर्किदा बाटोमा कसैले आफनो कुरा काटछन कि निकै ध्यान दिएर सुन्छन । उनी चाहन्छन, अरुले राम्रो नराम्रो जे भए पनि आफ्नो कुरा गरोस ।
आफनो नयां फिल्म ‘जाऊ हिड पोखरा’को प्रोमोसनको क्रममा चितवन पुगेका शोभितले नमस्तेफिल्मीकर्मीसंग यी कुराहरु बताएका हुन । कुराकानीकै क्रममा शोभितले आफु कहिल्यै पनि हराउन नचाहने बताउदै जसरी हुन्छ चर्चामा रहिरहने बताए । राम्रो होस या नराम्रो अरुले कुरा काटनु भनेको आफु चर्चित हुनु उनको बुझाई छ । त्यसो त अरुले राम्रो नराम्रो कुरा गर्दैमा कहिल्यै पनि रिसाउनु नहुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन- ‘राम्रो चर्चा चल्दा मख्ख पर्नेहरुले नराम्रो चर्चा चल्दा पनि स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । आखिर जस्तो कुरा काटे पनि आफु चर्चित भएको त हो नि । ‘
कुराकानीकै क्रममा उनले आफु सधै चर्चामा रहेको र रहिरहने पनि बताए । चर्चामा आउनको लागी कतिपय स्क्यान्डलहरु उनी आफैले पनि सिर्जना गरेका छन । केहि समय पहिले शोभित बस्नेतले फिल्म निर्देशन नगर्ने हल्ला चल्नु पनि नियोजित स्क्यान्डल भएको उनले खुलाए । ‘फिल्ममा केहि ग्याप भएको थियो , मेरो चर्चा सेलाएजस्तो लाग्यो त्यसैले यो उपाय अपनाएं’ – उनले भने ।
हाल उनी फिल्म जाऊ हिड पोखराको प्रदर्शनका लागी कम्मर कसेर लागीपरेका छन । फिल्म अगामी श्रावणमा प्रदर्शनमा आउनेछ । नेपालकै सबैभन्दा बढि फिल्म निर्देशन गरेको निर्देशकको छवि बनाएको शोभितको यो पच्चीसौ चलचित्र हो ।
नोट: शोभित बस्नेतसंग गरिएको कुराकानी केहि दिनमा जस्ताको तस्तै प्रकाशित गर्नेछौ ।
फिल्मीखबर डटकमको 'ओफा अवार्ड' आउदो जेठ २६ मा ।
बलिउड फिल्म '२ स्टेटस'को बक्सअफिसमा उत्कृष्ट सुरुवात ।